Ezona mpawu zibaluleke kakhulu kwiikawusi zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda aQinisekileyo | | I zihlangu, fashion
Nangona kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo iikawusi zazithathwa njengengubo engabalulekanga, inyani kukuba bafumene ubunzima obukhulu kwihlabathi lefashoni, ngakumbi ukuba sithetha ngamadoda. Siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ujonge kuyo ngaphambi kokuthenga iikawusi zamadoda.
1 Iipateni kunye noyilo
2 Iindidi zeekawusi
Iipateni kunye noyilo
Phambi kokuba amadoda abehlala enxiba iikawusi ezimnyama okanye ezimhlophe, kodwa namhlanje kungaphezulu kokuxhaphaka zonke iintlobo zemibala, uyilo kunye neepateni. Ukuba unganxiba itayi enesitayile okanye ibhatyi, kutheni unganxibi iikawusi?
Kolu phawu asinakho ukucebisa kakhulu njengoko sinokubonisa ezinye iindlela ukuze ukhethe eyona ikutsala kakhulu, kuba ngumbandela wokungcamla.
Akukho kunqongophala kweekawusi ezimibalabala, ezinemizobo, kunye namabinzana okanye neefoto. Ukonwaba akufuneki kube kungqubana nefashoni kwaye iikawusi yingubo elungileyo yokuyiphucula, kufuneka ubeke umbono omncinci. Ngapha koko, kuShicilelo unako yenza ezona sokisi zesiko. Yindlela elungileyo yeekawusi ukuba zingabonakali, kodwa zibe ziinkwenkwezi zokwenyani zokubonakala kwakho.
Kuxhomekeka kubude benduku abanayo, banokuhlelwa kwii-pinkies, ii-anklets, eziqhelekileyo kunye nexesha elide, phakathi kobunye ubungakanani. Enye okanye enye iya kusetyenziswa ngokuxhomekeke kwimpahla enxitywayo, izihlangu, ukusetyenziswa okunikiweyo kunye nexesha esikulo.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo i oluhlengahlengisiweyo, Ubungakanani apho iikawusi zihambelana khona nonyawo. Ukuba inde kakhulu, kuya kubakho iifolokhwe. Ukuba imfutshane kakhulu, i-sock iya kuhlala ingezantsi kwesithende sakho. Ukujonga ukuba iikawusi zihambelana ngokugqibeleleyo nonyawo lwakho, kungcono ukuzama kunye nezihlangu zakho. Kananjalo, xa ukhetha ubungakanani bekawusi, gcinani engqondweni ukuba ubukhulu nganye ihlala ibandakanya ubungakanani beembadada ezimbini okanye ezintathu.
Okokugqibela, xa uyokuthenga iikawusi ezintsha, qaphela ukuba ungabinamthungo Okanye, ubuncinci, ukuba ii-seams zithe tyaba. Ngaphandle koko, ukungqubana okwenzeka ngelixa uhamba kunokukhokelela kukoyikiswa kunye namadyungudyungu.
Nangona zonke izinto zinokubonakala zifana kakhulu, zidlala indima ebaluleke kakhulu kwiikawusi. Umzekelo, ukuba ungumntu obila kakhulu, kuya kufuneka ucinge ukuba a izinto eziphefumlayo nezingatyibilikiyo Iyakuthintela unyawo ukuba lungahambi ngaphakathi kwesihlangu okanye ukubila ekufunxeni iikawusi, ezinokubangela ivumba elibi.
Ke ngoko, amalaphu zokwenziwa zinokuba luncedo kakhulu xa kuthelekiswa nekotoni, edla ngokuba yeyona ixhaphakileyo. Okungakumbi mgangatho ndinazo izinto, ixesha elide lobomi besokisi. Kukhethwa ukuba uyikrobe ipokotho yakho kancinci kwaye zihlala ixesha elide. Kwelinye icala, ebusika siya kuba nomdla kwizinto ezijiyileyo nezifudumeleyo, ezinje uboya okanye ikheshi.
Njengoko ubona, iisokisi zineempawu ezininzi kunokuba ungacinga ngaphambi kokufunda eli nqaku. Phonononga nganye nganye phambi kokuthenga isibini esitsha kwaye ngokuqinisekileyo uya kuba ulungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » I zihlangu » Ezona mpawu zibaluleke kakhulu kwiikawusi zamadoda
Xa umfazi ejonge kuwe